Taf'Ita | Fitaterana an’habakabaka : Niakatra ny vidin’ny tapakila - Taf'Ita
Fitaterana an’habakabaka : Niakatra ny vidin’ny tapakila
Hatahorana hihena indray ny isan’ny mpizaha tany tonga eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fandehanan’ireo mpivezivezy noho ny toe-draharaha samy hafa.
Ahitana fiakarana ankehitriny ny vidin’ny tapakilam-pitaterana an’habakabaka. Maro ny antony mahatonga izany. Toy ny valanaretina corona virus, ohatra, izay nampiato ny fifamezivezena avy any ivelany niditra eto an-toerana nandritra ny volana maromaro lasa izay.
Niteraka vokadratsy ho an’ny firenena izany fahatapahan’ny sidina izany. Nitotongana ny toekarena teto an-toerana. Very asa ny mponina izay mivelona amin’ireny fandalovan’ny mpizahatany ireny. Voakasika indrindra amin’izany ireo mpivarotra asa-tanana vita malagasy. Voakasika amin’izany ihany koa ireo toerana fandraisana vahiny izay hivantanan’ny mpizahatany. Mihena ny vola miditra amin’izy ireo noho izany tsy fisian’ny mpitsidika izany ka tena mampihena tanteraka ny fari-piain’ny mponina sasany. Misy ny tsy manan-kivelomana fa miandry sy miantehatra amin’ny fahatongavan’ny vahiny. Misy fiantraikany lehibe eo amin’ny tsy firoborobona ny fizahantany ihany koa io fiakaran’ny tapakila io. Misy ny olona te-hiala sasatra eto an-toerana nefa noho ny fiakaran’ny tapakila izay lafo loatra dia aleony mijanona indray. Na ihany koa ohatra mitady an’izay takatry ny vola eo am-pelatanana. Misy fiatraikany lehibe ho an’i Madagasikara izany fanapahan-kevitra izany. Kanefa ny fahafinaretana azon’izy ireo, ny vola ihany koa tsy lany.
Ankehitriny, hita fa tsizarizary ny fandehanan’ity fitaterana an’habakabaka ity. Vokatry ny fahavitsian’ny olona mandeha no mahatonga izany. Manao izay hanarenana izany amin’ izao fotoana ny tomponandraikitra taorian’izay volana maromaro nisian’ny fahabangana izay.
Antony nampiakarana ny vidin’ny tapakila izany. Raha oharina amin’ny teo aloha, 3.000.000 Ariary ka hatramin’ny 35.000.000 Ariary ny vidiny ny taona 2009. Amin’izao fofoana izao anefa, tafakatra 5.000.000 Ariary ka hatramin’ny 12.000.000 Ariary. Arakaraka ny seza misy anao ihany koa anefa izany. Raha tsiahivina, nanome tolotra manokana ny fitaterana an’habakabaka tamin’ ny taona 2009. Nahazo tapakila iray faha ho fanomezana ny mpanjifa raha nividy tapakila iray. Na ihany koa hoe tapakila iray ihany fa afaka olona roa no mandeha aminy.
Tourisme- Covid-19 : RENOUVELLEMENT POUR REDYNAMISER LE TOURISME
FAMPIROBOROBOANA NY INDOSTRIA – PTASO : Hahita mangirana ny any Atsimo Andrefana